ikhaya AMANQAKU E-FOOTBALL AFRIKA Abadlali beBhola eKhatywayo base-Ivory Coast I-Cheick Tiote Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts
I-LB ibonisa iNqaku elipheleleyo leBhola yeBhola ezayo emva kwaziwa kakhulu ngeSiza; 'Mnu T'. I-Cheick Tiote Yendaba Yobuntwaneni kunye ne-Untold Biography Facts ikulethela i-akhawunti epheleleyo yeziganeko eziphawulekayo ukususela ngexesha lokuzalwa komntwana. Uhlalutyo lubandakanya ibali lobomi bakhe phambi kobuqili, ubomi bentsapho kunye ne-OFF kunye ne-ON-Pitch eyaziwayo into eyaziwayo ngaye. Qala uqale.
I-Cheick Tiote Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts -Minyaka yo kuqala
I-Cheick Tiote Ubungqina Bomntwana
Emva koko uCheick Ismael Tioté wazalwa ngo-21 Juni 1986 Yamoussoukro, isixeko esikhulu saseCôte d'Ivoire ngabazali bakhe, emva koMnu noMnu Toite. Wayeqinisekile ukuba idolophu yaseShantoukro yintlupheko, eneentlupheko. Uthi le nto yikholwa yomelela.
Wakhula ebudeni bentlanzi egazini eyayichitha indawo yakhe kwaye yaholela ekufeni komzali wakhe.
Emva kokufa kwabazali bakhe, uTiote kwafuneka ahambe edolophini lase-Abidjan elalibhekwa njengesixeko esikhuselekileyo. Wayevuma ukuba kwakukho umzi owamkhokela kwibhola.
Waqala ukudlala engahlambulukanga ibhola lebhola kwi-10 yobudala, engabinayo ibini iibhuthi kwaye ngamanye amaxesha usebenzisa i-slippers de ibe ngu 15.
I-Cheick Tiote Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts -Ukufa kwakhe
NgoMsombuluko ntambama, uJuni 5, 2017 yonke inkunzi yebhola yebhola yatshitshiswa ngokugqithiseleyo kunye nokulila emva kokufa okungahambi kakuhle kwe-Ivorian kunye neNewcastle United inkwenkwezi uCheick Tiote. Ingxelo ifikelela LifeBogger.com Ucacisa ukuba u-Cheick Tiote owaziwayo wafa eneminyaka eyi-30 emva kokuwa phantsi koqeqesho kunye neqela lakhe iBeijing Enterprises. Ngokudabukisayo, kwathiwa ulindela umntwana osandulanga iintsuku ezimbalwa emva kokufa kwakhe, kodwa uye wadlula waza washiya iintsana ezintathu ngaphambi kokufa kwakhe.
I-Cheick Tiote Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts -Ugqirha othembekileyo Ogqirha ukunyanga kwakhe
Kuphakanyiswe imibuzo ephakamileyo ukususela ekuveni kokufa kwakhe. Njenga ... Yintoni eyayibulala uCheick Tiote? ..
Kukho iingxelo ezichaza indlela amaNyango oogqirha abulala ngayo uCheick Tiote. Unokumangaliswa ngolu hlobo ukuba awukwazi nto ngembali yakhe kunye nabo.
Kuyafaneleka ukuba uqaphele ukuba umphakathi onobugwenxa onokuzikhusela unomkhuba wokuthembela oogqirha-ogqirha ukuze aphilise ukulimala kwebhola. Uthe ugqirha wayekhe wamphilisa xa wayenomdla kwi-knee yakhe yangakweso eyayimenza intlungu ibe yintambo yakhe. Emva koko e-Newcastle, iTiote yayisetyenziselwa ukuthatha imvume evela kumnikazi weMagpies uMike Ashley ukuba abuyele e-Ivory Coast ukuya kubona oogqirha bakhe.
I-Cheick Tiote Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts -Ubomi Bentsapho
I-Tioté ivela kwintsapho yamaSulumane ezinikeleyo. Ngendlebe nodliwano-ndlebe neNewcastle Evening Chronicle, UTioté uthe wayenabantakwabo noodade abalisithoba. Ukukhula e-Abdijan, wayeka izifundo zakhe esemncinci, esithi,
Kuphi i-Cheick Tiote yahlaselwa
"Ibhola liye lisoloko liyinto ebalulekileyo kum. Ukukhula kwidolophu yaseShanty e-Abdijan yimbi kakhulu, ndazi into endifuna ukuyenza kwaye ndaqinisekisa ukuba oku kuya kubakho ubomi bam. Kodwa ndasebenza kwaye ndasebenza kwaye ndayisebenzela kwaye ngenxa yalo msebenzi onzima endikwazi ukuwenza. "
Uxhasa abazalwana bakhe abahlanu noodade abathathu ngeemali awayezifumana kwibhola.
I-Cheick Tiote Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts -Ulwalamano lobomi
Unabantwana ababini nomfazi wakhe wokuqala, uMadah. Bahlala kwindlu ye-£ 1.5million ePonteland kufuphi naseNewcastle.
Ngo-29 Septemba 2014, kwabikwa ngu- Chroniccast Chronicle ukuba uTioté watshata nomfazi wesibini, uLaeticia Doukrou, kwikomkhulu le Ivory Coast, Abidjan.
Umtshato wawusenzeka ngaphambi kokuqala kwexesha. Igosa lakhe uJean Musampa, waqinisekisa umtshato kwiphephandaba lendawo, esithi "Ndingatsho ukuba watshada kwaye ngumtshato wakhe wesibini."
Ilanga libike ukuba umfazi wokuqala 'wayekhululekile okokuqala' kunye naye esatshatileyo kodwa kamva wagqiba ekubeni abize ubudlelwane bakhe ngenxa yokuba wayebiza ngamazwi akhe 'Waya kumhlangabeza um mama waza wachazela ukuba kutheni ufuna ukufumana umfazi othe xaxa. Wandisebenzisa njengomporo. Ingulube '.
Kungekudala emva koko, kwaxelwa ukuba wayephelile izinto kunye nenkosikazi yakhe egama linguNikki kunye nalowo owabeletha umntwana kuye obiza ngokuba nguRafael.
Xa egxekwa ngokuba nabafazi be-2 kunye nenkosikazi, isidlali saseNewcastle saseKing Cheick Tiote sakhawuleza ukukhusela indlela yakhe yokuphila ngokuthi "Akukho nto engaqhelekanga yokuba nabafazi ababini kunye nenkosikazi."
I-Cheick Tiote Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts -Uphantse waya ejele
Ngo-Oktobha i-2013 Tiote inenhlanhla ukuphepha entolongweni emva kokuvuma ukuba nelayisenisi yokuqhuba inkohliso nokusela.
Wanikwa isigwebo esinqunyanyisiweyo seenyanga ezisixhenxe kunye neeyure ze-180 zomsebenzi woluntu ongenakuhlawulwa. UJaji uJames Goss uthe uTiote, 27, wagweba ejele kuphela ngenxa yokuba wavuma ityala.
UMgwebi wamyeka, esithi: 'Andiqinisekanga ukuba, usebenzisa i talente eninzi, uya kuba nako ukunceda abanye kuluntu ngokubakhuthaza nokudlulisa izakhono zakho ngendlela.'
I-Cheick Tiote Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts -Ukuqhuba Amashishini Amashishini Efowuni eNigeria
NgoFebruwari 2014, iTioté yaqalisa umgca wefowuni yamadoda ebizwa ngokuba yi-TIC, kunye nomqambi uYusuf Abubakar, waseNigeria owawulawula kuyo.
Ngokutsho kweAkubakar; "I-Tiote yinto enhle kwaye ihlakele kumntu womhlaba. Xa ndidibana naye ndandibetha inkwenkwezi kodwa wayenobungane. Udla ngokundibiza ngokuba ngumphathi, mna ndisebenza phantsi kwakhe. Ndiyifumana ukumsebenzela. Uthabatha into endiyithethayo kwaye isebenza kakuhle. "
I-Cheick Tiote Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts -Umsebenzi kwiSishwankathelo
Waqala umsebenzi wakhe kunye neCidio Bibo ecaleni elincinane. Kwi-2005, wahlaselwa yiqela laseBelgium neAnderlecht, emva koko wenza iqela lakhe likaAnderlecht kumdlalo weNdebe weBelgium abalahlekelwa yiGeel. Ngexesha le-2007-08 wayedlala ngemali mboleko ku-Roda JC ukujoyina i-Ex-FC Bibo kunye neqela lamazwe ngamazwe e-Feyenoord uSekou Cissé. Ngo-2 Oktobha 2008 u-Cheick Tioté wasayinwa kwi-Dutch Eredivisie ecaleni kweC FC Twente ngenkokhelo echazwe kwi-750,000. Uphumelele isihloko sesiDatshi kwixesha le-2009 / 10 kwaye liye labonakala kwi-Europa League ne-Champions League. UTioté wajoyina i-English Premier League ecaleni laseNewcastle United ngo-26 Agasti 2010 ngemali ye-£ 3.5 yezigidi.
I-Cheick Tiote Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts -KwiBomiBogger Rankings
Sinika indawo yeTyote yomntu osisigxina.